Fasax ayaan rabnay inaan Kenya u aadno, balse dadka dhan waxay u malaynayeen in la isoo gudi doono - NorSom News
Fasax ayaan rabnay inaan Kenya u aadno, balse dadka dhan waxay u malaynayeen in la isoo gudi doono
Afnan Ahmed oo ah gabar dhalinyaro soomaali ah ayaa maqaal wax badan ka hadlaya kusoo daabacday wargayska Aftenpostenka oo ah kan wadanka ugu weyn. Gabadhan ayaa qoraal qurux badan kusoo bandhigtay dhibta iyo shakiga badan ee gabdhaha muslimiinta ah ee wadanka ku korey, gaar ahaan soomaalida ay kala kulmaan wadanka. Waxay ay sheegtay in marar badan aan loola dhaqmin sida dad kale, ee wax walbe oo ay samayso la galiyo shaki ama laga keeno su aalo, loolana dhaqmo sidii iney tahay danbiile uu danbiga asal ka yahay.
2009 ayaa rabnay in anigu iyo qoyskayku aan fasax u aadno Kenya, si aan usoo barano habaryarteey hooyaday ka yar. Balse markaan u sheegay macalimiinta iyo ardeyda fasalka ila dhigato, kuli waxay u malaynayeen in la iisoo gudi doono. Aniga iyo hooyadeyba waxaa nalooga yeeray xafiiska macalinkeyga, aniga waxaa la iiga yeeray inaan kulan aan la yeesho kalkaalisada caafimaadka iskuulka. Hooyana waxaa looga yeeraya xafiiska talo-bixiyaha iskuulka, si uu hooyo looga warbixiyo ciqaabta ay leedahay in gabar la gudo.
Markaan dhiganayay klasska 8-aad ayaan bilaabnay aniga iyo labo gabdhood oo saaxiibaday ah inaan qaadano xijaab iyo dhar asturan, qof walbaa wuxuu i siinayay hab iyaga oo na tusaya naxariis sidii inaan nahay dad dhibanayaal oo dhib haysto. Mararka qaarkoodna waxaaba la i waydiin jirey in hooyo igu qasabtay xijaabka.
Waligey waxaan xiiseyn jirey siyaasada, waxaana ahaa qof aan la gaban fikirkiisa ee banaanka keena. Markaan yaraa wax walbe waxay iila muuqdeen xaqdaro, sida awoodaha iska soo horjeedo, Ciraaq, dhibka ka dhex taagan isreal iyo falastiin iyo waliba Afgaanistan. Nasiibdaro waxaan ka hadlay howlo qaldan, markaan cadeeyay fikirkeyga iyo waxa aan ka qabo arinkaas, waxay hooyadey heshay warqad ka socoto iskuulka iyo mid ka socoto barnevernet, iyada oo ay leeyihiin waxaan ka cabsi qabnaa fikirka xagjira ee gabadhaada.
Afnaan ayaa ka codsatay qolyaha mediaha qora inay kala saaraan dhaqan iyo diin. Marar waxyaalo dhaqan ku saabsan ayay warbaahintu ka dhigtaa diin, sida in gabar lagu qasbo guur aysan rabin, ama ay dhibaato kala kulanto sababtoo ah waxay jeclaatay qof khaldan.
Halkan ka akhri maqaalka oo dhan
Previous article40 qodob oo ay Sylvi Listhaug rabto inay ku adkayso sharciga qoxootiga oo baarlamaanka looga doodaya: kuwee ugu muhiimsan
Next articleIn passportka qof wadanka dhalashadiisa haysto lagu qoro (ukjent) waxay noqon kartaa sharci daro